Diyaaradda Gaadiidka A400M ee Militariga, oo ay si firfircoon u adeegsadaan Taliska Ciidanka Cirka Turkiga, ayaa heshay shahaadada markab dagaal oo isku mar ah. A400M Gawaarida Gawaarida Ciidanka ee Generaal cusub oo ay diyaariyeen Airbus, labadaba [More ...]
agagaarka magaalada teknoolojiyadda qaranka ee ku jiheysa teknolojiyadda Turkiga ee dhaqaalaha waddanka ayaa sii wadda mashruuc kordhinta taageerada Bursa. Xakameeyayaasha naxdinta leh ee ay adeegsato ASELSAN, oo ah hay'adda ugu xoogan ee warshadaha difaaca, iyadoo soo dejineysa tiro aad u badan, ayaa hadda ku sugan Xarunta BKM Bursa Mold Center. [More ...]
Milatariga Ruushka ee farsamada-farsamada mas'uul ka ah adeegga federaalka ee iskaashiga fsvts'n Madaxweynaha Dmitriy Şugayev, TF-X Russia waa jiilka dagaalka shanaad, gaar ahaan matoorada, qiimeynta avionics, nidaamka dhisan, fuselage iyo tijaabada ah ee horumarinta nidaamyada taageerada nolosha Turkiga. [More ...]
Mashruuca Shabakadda Isgaarsiinta dhijitaalka ah ayaa bilaabay inuu ka soo muuqdo gobollada Adana iyo İzmir kadib gobollada Ankara iyo Istanbul. 22.04.2020 adeegsiga Agaasinka Guud ee Amniga ee udhaxeysa Agaasinka Warshadaha Difaaca iyo ASELSAN [More ...]
Natiijooyinka maaliyadeed ee ASELSAN afartii bilood ee hore ee 2020 ayaa la shaaciyay. Shirkaddu waxay ku sii wadday isbeddelkeeda kobcinta isbeddelka saddexdii bilood ee hore ee 2020 sidoo kale. Shirkadda ASELSAN 3-bilood ayaa soo kordhay 30% marka la barbar dhigo isla muddadii sanadkii hore, 2,6 [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu cadeeyay in sharafta saxda ah ee “diyaaraddaha cusub ee istaraatiijiyadeed ee gaadiidka” A400Ms ay tahay xarunta kaliya ee dayactirka ee Kayseri ay ku leedahay magaalada oo dhan. [More ...]
Waxaa la aasaasay horraantii 2018 si loo yareeyo ku tiirsanaanta agabyada loo adeegsado badeecadda ASELSAN, si loo soo saaro wax soo saar ay dhibaatooyin ka qabaan hannaanka sahayda guud ahaan waddanka / gudaha, si loo naaquso kharashaadka sahayda iyo waqtiyada, iyo in la helo karti farsamo. [More ...]
Hambalyo sanad-guuradii 109-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamadeena Cirka, kaas oo kor u dhaaftay laabtaheena qarniga in ka badan qarniyo khibrad u leh duulista militariga, shaqaale u qalma, tikniyoolajiyadda casriga ah iyo guulaha la taaban karo, taas oo ah sharaf iyo karaamo ummaddeena sharafta leh. [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa ka qaybqaatay hawlgal casri ah oo ay soo abaabuleen bilays hawlgal gaar ah oo lagu qabtay guri ku yaal Xarunta Tababbarka Tacliinta Sare (SATEM) dhexdeeda ee Maareeyaha Hawlaha Gaarka ee Agaasinka Guud ee Amniga. Wasiir Varank, [More ...]
Sida la ogsoon yahay, qandaraaska wax soo saarka guud ee 'ALTAY Main Battle Tank' waxaa la saxeexay inta udhaxeysa Agaasinka Warshadaha Difaaca (SSB) iyo BMC Automotive Nofeembar 9, 2018. Wajahadda heshiiska la saxeexay, BMC waxay joogtaa marxaladda koowaad, 40 [More ...]
Madaxweynaha Madaxtooyada Turkiga, Warshadaha Difaaca. Dr. İsmail DEMİR wuxuu sameeyey bayaanno muhiim ah intii lagu jiray guddi tooska ah oo ay qabanqaabiyeen SETA Foundation. Barnaamijka Diyaaradaha Dagaalka Qaranka iyo Diyaaradaha dagaalka ee Ciidanka Cirka Turkiga [More ...]
Madaxweynaha warshadaha Difaaca Madaxtooyada Turkiga. Dr. İsmail DEMİR wuxuu sameeyey bayaanno muhiim ah inta lagu gudajirey guddiga qadka intarnetka ee ay qabanqaabisay SETA Foundation. Madaxweynaha oo ka jawaabaya su’aasha ku saabsan mashruuca ALTAY Main Battle Tank (AMT) [More ...]
Intii lagu guda jiray hawlihii faafa ee COVID-19, SAHA Istanbul waxay hawlaheedii shabakadda u gaysay adduunka dijitaalka ah. SAHA Istanbul ee AdigatubeFacebook iyo Twitter Websaydhka Wershadaha ugu Weyn ee Turkiga ayaa si toos ah ugu baahiya xubnaha xisaabaadka shirkadda FIELD ee magaalada Istanbul [More ...]
Dagaalyahan F35 ayaa ajandaha ku jiray maalmahan. Dagaalkii F35 ee aan dooneynay inaan ka iibsano Mareykanka wuxuu isu beddelay xiisad udhaxeysa labada dal. Sababta ayaa ah nidaamka difaaca hawada ee S-400 oo laga soo iibsanayo Ruushka. Hagaag F35 [More ...]
Wasiirka Gaashaandhigga Qaranka Hulusi Akar ayaa waxaa wehliyay Taliyaha Guud ee Ciidamada Gen. Yaşar Güler, Taliyaha Ciidamada Dhulka Gen.Dhand Dündar, Taliyaha Ciidamada Cirka, Gen. Hasan Küçükakyüz iyo Admiral Adnan Özbal, Taliyaha Ciidamada Badda. [More ...]